Jacaranda (बैंगनी रूख) कि र कहाँ रूस मा बढ्छ? Jacaranda (बैंगनी काठ) कहाँ बढ्छ?
अपवाद बिना छक्क र आनन्द संग फूल बिरुवाहरु को सबै प्रेमीहरूको Jacaranda (बैंगनी काठ) देखाउँदछ फोटो, देख। रूस बढ्दै छ extraordinarily सुन्दर रूख छ? यो कस्तो छ? यसलाई कसरी बढ्न? यी हामी यस लेखमा जवाफ हुनेछ प्रश्नहरू छन्।
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) परिवारमा Bignoniaceae पर्छ। यसको बारेमा पचास प्रजाति छन्। मूलतः यो ठूलो वा मध्यम आकारको रूख (सदाबहार) उष्ण कटिबन्धीय र subtropics उब्जाउ छ।
Jacaranda (बैंगनी काठ): कहाँ यो बढ्छ?
बैंगनी काठ को जन्म ठाउ अमेरिका को Subtropical र ट्रपिकल क्षेत्रहरु मानिन्छ। म सबै महादेशमा वसोवास गर्न प्रकृति को यो चमत्कार पराउँछु। जिम्बाब्वे, मेक्सिको र रूख को फूल मा वसन्त को आगमन प्रतिनिधित्व गर्छ।
आज Jacaranda (बैंगनी काठ) मात्र होइन दक्षिण अमेरिका मा तर पनि अमेरिकी, मेक्सिको, भारत, इजरायल र अन्य देशहरूमा पाइन्छ। यो फूल बिरूवा सडकमा मात्र होइन decorates, तर पनि यसको धेरै उच्च गुणवत्ता काठ, महंगा फर्नीचर बनाउन प्रयोग गरिन्छ लागि मूल्यवान। यो बोट को प्रयोग मा, हामी पछि कुरा हुनेछ।
दक्षिण अमेरिका, दुई वा तीन वर्षसम्म यसलाई दुई मीटर Jacaranda (बैंगनी काठ) सम्म बढ्छ। यो प्रकृति को अति सुन्दर सिर्जना कहाँ बढ्छ, यो फूल अवधिमा हावा मह अलि reminiscent छ जुन एउटा असामान्य अरोमा, भरिएको छ। एक परिपक्व बोट उचाइ मा 30 मीटर पुग्न सक्दैन।
Jacaranda (बैंगनी काठ) रूस मा राम्रो मुख्य रूप विशेष संस्करणहरू मा राखिएको फोटो, देखि, धेरै फूल उत्पादक चिनिएको छ। यसैबीच, धेरै देशहरूमा यो एक भव्य बोट छ यो लगभग हरेक सडक पाइन्छ भनेर प्रिय छ। साथ फूल बैंगनी रूखहरू दसौं त्यहाँ आफ्नो खुट्टा अन्तर्गत शहर नाजुक bluish तुवाँलो र असामान्य बैजनी गलैँचा envelop। धेरै मानिसहरू यो बोट भाग्य ल्याउँछ भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यसैले एक बच्चा को जन्म पछि, जवान आमाबाबुले पक्कै यो यार्ड मा लगाए हुनेछ।
विवरण बैंगनी काठ
यो रूखको फूल देखे सबै, एक चमत्कार बकाइन रूपमा वर्णन गर्नुहोस्। आफ्नो विपरीत, फर्न, peristorassechonnye छोड्छ।
Inflorescence एक panicle, टर्मिनल वा axillary छ। फूल सधैं बिसेकषिल, ट्यूबलर, zygomorphic पाँच-membered। सामान्यतया त्यहाँ बैजनी र सेतो फूल संग प्रजाति हो, नीलो वा थोडा बैंगनी रंग चित्रित।
फूल 30 को panicles, र कहिले काँही थप टुक्रा मा भेला भए। आफ्नो लम्बाइ व्यास एक वर्ष3सेमी Jacaranda blooms भन्दा बढी छैन दुई पटक मा5सेमी छ -। वसन्त र शरद ऋतु (थप प्रशस्त फूल)। काठ नाजुक, जटिल आकारको पात को रसीला पत्ते लागि ज्ञात छ। आफ्नो लम्बाइ - 40-50 सेमी तिनीहरूले फर्न पात धेरै समान छन् ..
Jacaranda (बैंगनी काठ) मा रूसी, दुर्भाग्य, प्राकृतिक अवस्थामा बढ्न गर्दैन। धेरै अवैतनिक उत्पादक असामान्य बिरुवाहरु को खेती प्रयोग गरिरहेका छन्, तर हालसम्म प्रयासमा असफल भएको छ।
हामी पहिले देखि नै भन्ने उल्लेख गरेको छ बहुमूल्य काठ प्रजातिहरु Jacaranda अत्यधिक संसारमा मूल्यवान छ। त्यो रूपमा जानिन्छ ROSEWOOD, लक्जरी फर्नीचर, अद्वितीय लक्जरी आइटम (Inlaid धातु र नक्काशियों) को उत्पादन को लागि प्रयोग गरिन्छ। साथै, यो काठ भव्य सांगीतिक साधन उत्पादन भएको छ।
heartwood पलिश बैजनी रङ्ग रंग संग एक सुन्दर खैरो हुन्छ। उदाहरणका लागि, ब्राजील मा, तपाईं देख्न र zhakaranady देखि स्मृति चिन्ह खरिद गर्न सक्नुहुन्छ - carved मूर्तिहरु विदेशी जनावर। तिनीहरूले तपाईं एक कपडा तिनीहरूलाई हटाउन विशेष गरी जब, एक धेरै राम्रो कोमल गन्ध छ।
Jacaranda (बैंगनी काठ) रूस मा, जहाँ यसलाई बढ्छ?
यो हाम्रो देशमा मुख्य रूप एक houseplant छ कि पहिचान गर्नुपर्छ। यो Jacaranda (बैंगनी काठ) रूस मा सफलतापूर्वक क्रिमीआ को दक्षिण तट मा वनस्पति उद्यान मा हुर्केका गरिएको उल्लेख गर्नुपर्छ हुनत। तर, यो छैन जो दक्षिण अमेरिका को सडकमा सजाउनु को tridtsatimetrovoy भव्य सुंदरियों छ। हाम्रो अवस्थामा, बैंगनी रूख उचाइ तीन मिटर सम्म बढ्छ।
सुन्दर बोट धेरै प्रेमीहरूको घरमा Jacaranda हुर्किसकेका। तिनीहरूले त्यसो गर्न गाह्रो छैन तर्क। आज, धेरै ठूलो फूल पसलहरूमा यो अद्भुत बोट को बीउ बेच्न।
बीउ देखि बढ्दै
बीउ पहिलो पानी मा भिगो छन् जो एक पूर्व-stimulators ( "अतिरिक्त-Riba" एचबी-101 "APPIN" "जिक्रोन" र एम। पी) थपिएको छ गर्न। यो समाधान मा, बीउ 5-6 घण्टा राख्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरू एक प्रकाश, छाडा, नम माटो (- सेमी अधिक 1 भन्दा गहिराई) मा seeded थिए। Sprouting फिल्म अन्तर्गत प्रकाश मा, +23 ... + 28 डिग्री को एक तापमान मा हुन्छ। बिरुवा 10 दिनमा, धेरै चाँडै देखा, तर कहिलेकाहीं अंकुरण तीन दशक सम्म ढिलाइ भएको छ। यो आफ्नो गुणवत्ता मा निर्भर गर्दछ। बिरुवा हासिल गर्न तीन महिना तिनीहरूलाई डुबुल्की मार्न छैन, त्यसैले बीउ एक बरु ठूलो क्षमता मा लगाए गर्नुपर्छ।
हाउस बिरुवाहरु - राम्रो हेरचाह तपाईंको रूख 1.5 मिटर Jacaranda (बैंगनी काठ) रूस मा एक उचाइ पुग्नेछ (तपाईं यस लेखमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटो।)। यस्तो अवस्थामा, यो धेरै शायद blooms। यो प्रजाति को फूल बिरुवाहरु मात्र वनस्पति उद्यान मा देख्न सकिन्छ।
Jacaranda उज्ज्वल प्रकाश,3घण्टा यसलाई प्रत्यक्ष सूर्यका वहन रुचि। संयंत्र पूर्वी र पश्चिमी Windows मा सहज महसुस। पट समय समयमा एकपक्षीय प्रकाश मुकुट विकृत गर्न सक्छन् घुमाइयो गर्नुपर्छ।
तापमान को गर्मी मा बिरुवाहरु को सामान्य विकासको लागि आवश्यक छ, - +25 ° सी, हिउँदमा - +19 ° सी Jacaranda गर्मी प्रेम हावा मा "पैदल"। तपाईं बाहिर लिन यो स्थान मा फूल हावा बाट सुरक्षित हुनुपर्छ।
Jacaranda (बैंगनी काठ) रूस मा - धेरै माली को सपना। तर कसरी यी विदेशी बिरुवाहरु हेरचाह गर्न? बैंगनी रूख नियमित माटो सुकाउने अस्वीकार्य पानी हाले। हिउँदमा, एक सानो कट टीन। मात्र नरम पानी प्रयोग, यो कोठा तापमान मा हुनुपर्छ।
Jacaranda - एक ट्रपिकल बोट, त्यसैले यसलाई नम हावा आवश्यक छ। उहाँले कोठा अवस्थामा सहज थियो, यो नियमित sprayed हुनुपर्छ।
बैंगनी रूख खुवाउने आवश्यक छ। वसन्त र गर्मी (बढ्दै सिजन) खुवाउनुभयो जटिल मल कारखाना मा दुई पटक एक महिना भन्दा बढी छ। प्रत्येक Jacaranda कट वसन्त। बिस्तारै, उनको पुरानो पात गिर, ट्रंक खुला राखे। किन Topping मार संयंत्र rejuvenate र आफ्नो मुकुट को शोभा दिन छ।
तपाईं मूल प्रणाली पट को सम्पूर्ण मात्रा ओगटेको देख्न सक्नुहुन्छ हुँदा, आवश्यक वसन्त सबैभन्दा अक्सर प्रत्यारोपण प्रदर्शन।
वसन्त बीउ (माटो तापमान - - 25 ° C) र गर्मी मा cuttings यो बोट दुई तरिकामा प्रचारित गर्न सकिन्छ। बिरुवा छिटो बढ्न। को मार दशौं दिन देखिन्छन्। एक महिना पछि, आफ्नो उचाइ 15 सेमी पुग्यो।
हामी तपाईंलाई Jacaranda (बैंगनी काठ) भनिने अद्भुत बोट प्रस्तुत गरेका छन्। यो, रूस बढ्दै छ यो बोट? हो, यद्यपि यो आफ्नो मातृभूमि मा जस्तै शोभा हाम्रो फूलहरु खुसी छैन।
Blackberries staghorn: वर्णन, वासस्थानमा, सम्पत्ति
ग्रेनाइट के हो र कहाँ यो प्रकृति मा पाइन्छ
अष्ट्रेलिया - धरती मा driest महादेशमा
Opossum: प्रजाति विवरण
पुस्तकको छोटो सामग्री: "देश को unlearned पाठ मा"
कला मा Primitivism: एक वयस्क संस्करणमा छोराछोरीको कल्पना
BDK "Rhinoceros": परियोजना 1174
कुन सोची डल्फिनरीम सर्वोत्तम छ?
तपाईं लामो नाक भएको माछा के भन्छौ?
लज पराल मा मन्दिर: इतिहास र फोटो